Oktoobar | 2010 | WEEJIDOW
Archive for Oktoobar, 2010
Ganacsatada Suuqa Bakaaraha oo ka cabanaya Suuq la’aantii ugu darneyd
Oktoobar 31, 2010
Ganacsatada Suuqa Bakaaraha oo ka cabanaya Suuq la’aantii ugu darneyd,kadib markii Ciidamada Shisheeye ay sii kordhiyeen duqeymaha ay u geysanayaan Suuqa Bakaaraha.
Kadib markii Suuqa Bakaakraha uu marti u noqday Madaafiicda Ciidamada Shisheeye ay ku garaacaan ayaa waxaa madaafiicdaasi saameyn xoogan ay kuyeelatay ganacsatada wax ku iibisa gudaha suuqa bakaaraha, Kagagadaal markii madaafiicdaasi ay barakicisay dadkii wax iibsan lahaa waxaan haatana soo wajahday ganacsatada suuq la’aan baahsan.
Mad kamid ah ganacsatada kabaha ku iibisa oo maantay lahadlay Idaacada islaamiga ah ee Alfurqaan ayaa sheegay in ay soo wajahday suuq la’aan baahsan, taasi oo uu sheegay in ay sabab utahay dadkii wax iibsan jiray oo u barakecay duleedyada magaalada Muqdisho,iyo dadka haatan ku haray magaalada oo hadii ay suuqa ay u soo adeeg tagi lahaayeen kawal walsan madaafiicda joogtada ah ay Ciidamada Shisheeye la dhacaan suuqa.
“Markii hore oo dadka ay suuqa joogeen nalol maalmeed fiican ayaan heli jirnay oo waxaa laga yaabaa in maalintii ay noo gadmaan ilaa 12-joog oo kabo ah, balse hadda dadkii suuqa mayimadan marka waxaaba lagayaabaa in malintii oo dhan aanan wax kabaa gadin taasina waa dhibaato oo ilmo iyo xaasas ayaa inagu xariira” Sidaas waxaa yiri Mid kamid ah ganacstada Suuqa Bakaaraha.
Sidoo kale mid kamid ah ganacsatada dharka oo isna goobtiisa ganacsi kulahadlay Idaacadda Alfurqan ayaa tibaaxay in dhamaan ganacsatada suuqa Bakaaraha haatan ay xili xun ay kujiraan oo dhaq dhaqaaqooda ganacsi uu aad u liito. Isagoona tilmaamay in naxariista ilaahay aysan kaquusanayn wuxuuna ilaah karjayay indhibaatadan uu ilaah kadul qaado iyo madaafiicda ay Ciidamada Shisheeye ay sida araxan darada ugu garaacan xaafadaha kaladuwan ee magaalada Muqdisho.
Si kasataba ha ahaatee Madaaficda xoogan ay Ciidamada Shisheeye ay ku garaan xaafadaha kaladuwan ee magaalada Muqdisho ayaa saamaysay dhamaan adeegyada bulshada sida goobaha Ganacsiga ,Waxbarashada Caafimadka iyo dhamaan adeegyadii bulshada,Ayadoona haatan ay ganacsatada suuqa Bakaaraha ay walaac kamujinayaan sii wadista hoolohooda ganacsi.
Xildhibaannada Baarlamaanka oo cod gacan-taag ah ku ansixiyay Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Maxamed (Farmaajo) ayay xildhibaannada baarlamaanka maanta ku ansixiyeen cod gacan-taag, iyadoo inta badan mudanayaashii kulankii maanta ka qaybgalay ay codka siiyeen ra’iisul wasaaraha.
Kulankan ayaa waxaa shir-guddoominayay Afhayeenka Baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan, waxaana xubnaha kulanka ka qaybgalay ay ahaayeen 391-mudan, wuxuuna Shariif Xasan sheeagy in codeyntu ay noqonayso gacan-taag ah, si ay sahlanaato in tirinta codadka.
Xildhibaan C/raxmaan C/shakuur Warsame oo ka mid ahaa xildhibaannadii qabay in codeynta laga dhigo qarsoodi, oo kulanka ka hadlay intii aan codka la qaadin, ayaa sheegay in markii ay arkeen khilaafka soo dhexgalay baarlamaanka ay go’aankoodii ka laabteen ayna u tanaasuleen midnimada baarlamaanka, ayna aqbaleen in codeyntu ay noqoto gacan-taag.
“Kulankan oo ahaa Kalfadhigii 11-aad ee fadhigiisii labaad, waxaa soo xaadiray 391-xildhibaan, waxaana codka siiyay ra’iisul wasaaraha 297-xildhibaan, waxaa diiday 92-mudane, iyadoo ay ka aamuseen laba xildhibaan, sidaa daraadeedna wuxuu u fasaxan yahay inuu soo dhiso dowlad,” ayuu yiri guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ugu dambeyn kulanka soo xiray.
Ra’iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Maxamed (Farmaajo), ayaan kulanka lagu ansixiyay ka qaybgelin, iyadoo ra’iisul wasaaraha laga sugayo inuu soo dhiso xukuumad, taasoo baarlamaanka mar kale laga ansixin doono.
Ansixinta ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, ayaa meesha ka saaraysa khilaafkii u dhexeeyay labada mas’uul ee dalka ugu sarreysa dalka, inkastoo aan la ogeyn wixii ay ku heshiiyeen, iyadoo xubnaha baarlamaanku ay soo dhaweeyeen ansixinta ra’iisul wasaaraha Soomaaliya.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo, ayaa muddo dheer ku noolaa Mareykanka, halkaasoo uu wax ku bartay kana shaqeynayay, waana mas’uul ku cusub siyaasadda Soomaaliya, inkastoo uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu qayb libaax ka qaato xalinta dhibaatada dalka Soomaaliya ka jirta.
Taariikhdu Waa Tusmada Nolosha “DigilMiriflow” Q-19aad
Arintii foosha xumeyd ee lagula dhaqmey qoreyaashii United Nationka ee aheyd meeshii la rabo diyaarad lagu geyn jirey, meeshaa la rabina laga dhigi jirey bahlo galeen, aana nabadi ka jirin, waxaa xaqiiqo ah meesha loo saarey diyaaradda waa la rabey in taariikhdooda lagu shaaciyo dunida, isla markaana la yiraahdo waa taa taariikhda soomaalidu ay leedahay, dhaqanka soomaaliduna waa dhaqankan si loo yiraahdo ayadoo qowmiyadaha kale oo dhan lagu ridaayey af gembi taariikheed.
Arimahaas ay damcsanaayeen oo dhan waxaa fashiley nin qoraa ah ee u dhashey wadanka Sweden, waana kii aan hore u soo sheegney, arintana waxaa ay soo shaac baxdey mar la isugu yimid shir jaraa’id oo looga hadlaayey taariikhda aduunka laguna qabtey wadanka Sweden.
Qoraagii Iswiidhishka ahaa wuxuu su’aalo weydiiyey soomaalida, oo ku saabsaneyd taariikhdooda iyo deegaanadooda, meeshana waxaa isugu yimid aqoon yahano soomaaliyeed oo ay ka hadlayeen qof waliba deegaanka uu ka yimid, ama u dhashey.
In badabn markey si fiican ooga hadleen deegaanadooda, sheegeena taariikhdooda, ayaa waxaa la soo gaarey Qowmiyadda DigilMirifle taariikhdeeda iyo deegaanadeeda, waxaa halkii istaagey nin Mahaatiri ah asagoo iska dhigaaya in uu ka soo jeedo DigilMirifle, wuxuuna hadaladiis uu ku bilaabey sidii ay caadadu u aheyd oo ah xaqa in ay daboolaan, beena sheegaan, afka ay u dhigtaan wax walboo DigilMirifle khuseeya, taana waxa ay ka dhigan tahay adigoo yiri waxaan daboolayaa taariikhdii Cusmaaniyiinta.
Ninkii Mahaatiriga ahaa oona sheeganayey in uu aqoon yahan yahay asagoon fiirinin hareerihiisa, waxna aan hubsan, ayuu noqdey mid halkii ku ceeboobey, in kastoo ay ku maah-maahaan “Ceeb looma Dhinto”, noqdeyna mid khaladaado waaweyn ku dhacey, halkiina kala tagey waji xumaan uusan fileynin marnaba, ninkii waxa uu noqdey mid ku soo aroora sedex arimood oo kala ah:-
1. Asagoo noqdey mid aan ku kalsooneyn Nasabkiisa, sheegteyna nasab kale, wuxuu noqdey waxey dad ku sheegi jireen oo ah “MIDGAAN”.
2. Asagoo nasabkiisa uu ku gatey raashiin la’eg baahida markaas haysey, noqdeyna mid aan helin qeymuhuu ku raadinaayey nasabkiisa, ama uu rabey.
3. Asagoo sii xoojinaayey balamihii ay wada galeen reer Mahaatiri, ee ku aadanaa Qowmiyadda DigilMirifle, ballantaasoo ahey in la sameeyo wax walba oo sababi kara sidii loo dhici lahaa DigilMirifle, xitaa hadey noqoto wax bulshada dhexdeeda ka mamnuuc ah.
Ninkaa aqoon daradiisa “Jaahilnimadiisa” waxaa isla shirkaa jaraa’id fadhiyey aqoonyahano u dhashey qowmiyadda DigilMirifle, aqoonyahanada DigilMirifle waxaa ku dhex jira mid ay si gooni ah ay isu yaqaaniin ninkan sheegtey in uu yahay DigilMirifle, kan wax sheegteyse uma uusan aqoon ninkey is yaqaaneen in uu u dhashey qowmiyaddan.
Ninkan iska dhigey nasab dhiman waxa uu ku jirey riyo ah, in Sweden ay mahaatiri xukumeysey, ayna garab ku siin doonaan sheegashadiisa, rabeyna hadii wax la dhiibayo in asaga gacanta loogu soo shubo, iyadoo aan meesha ka marneyn jaahilnimo ku gabowdey.
Ninkaas markuu hadalka qabsadey waxa uu ku bilaabey hadalkiisii beentii caadada u aheyd ee ay ka sheegi jireen qowmiyadda DigilMirifle, ayagoo had iyo goor raadiya in ay leexsadaan cadka ay leedahay qowmiyadda DigilMirifle, been sheegistaas waxaa u sii dheer qoraaladooa oo is daba jooga ee ku aadan dadnimada qowmiyaddan iyo hantidooda guurto iyo ma guurtoba.
Hadalkii markii uu dhameystey aqoonyahankii nasabkiisii ka sheegtey ee is lahaa si fiican ayaad u hadashey weyna kuu gashey, ayaa waxaa ka daba qaatey ninkey mudada dheer is yaqaaneen, uusana u aqoonin hoos ahaan in uu yahay DigilMirifle, mana fileynin in uu jiro qof ka hor imaan karey hadaladiisii.
War Deg Deg ah: Qarax lala eegtay ciidamada AMISOM
Oktoobar 30, 2010
Qof ayaa ku dhintay iyo ilaa laba qof oo kalena ay ku dhaawacmeen rasaas ay fureen ciidamada Burundi ee ka tirsan kuwa midowga Africa ee ku sugan magaalada Muqdisho.
Ciidamada, ayaa rasaasta furay kadib markii qarax lala eegtay gaari ay saarnaayeen oo marayay jidka warshadaha meel ku dhow saldhig ay ku leeyihiin kulliyadii hore ee Jaalle Siyaad.
Warbixintan ayaa sheegtay in afhayeenka AMISOM uu u sheegay in qarax uu dhacay, balse cidna aysan waxba kaga noqon ciidamada Midowga Afrika.
Weerarkan, ayaa waxaa mas’uuuliyadiisa sheegatay Xarrakatul Shabaabul Mujaahidiin, iyadoo sarkaal u hadlay uu sheegay inay ku dileen qaraxa afar askari oo ka tirsan ciidammada Burundi oo watay gaadiidka qaraxa lala beegsaday.
Waa markii labaad oo agagaarkaas qarax lagu weeraro ciidamada Midowga Africa.
Warar kale: Dadaalo lagu doonayay in lagu sii daayo Yuusuf Dabo-geed oo fashil ku dhamaaday iyo warar sheegaya in Jirdil loo geystay.
Warar lagu kalsoonyahay oo ay heshay Idaacada Waajidpress ayaa xaqiijinaya inuu fashil ku idlaaday kulan dhexmaray Saraakiil Itoobiyaan ah iyo kuwa Soomaali ah,kaasi oo looga hadlayay sidii loo sii diin lahaa Yuusuf Axmed Hagar Dabo-geed.
Kulanka oo kadhacay Xadbeenaadka Wilaayada Hiiraan ay la wadaagto Itoobiya ayaa labada dhinac waxa ay uga hadleen sidii Ciidamada Itoobiya ay usii deyn lahaayeen Yuusuf Dabageed oo mudo Todobaad ku dhow ku xiran xabsi kuyaala deegaanka Feer-feer .
Saraakiisha Itoobiya ee kulanka ka qaybgalay ayaa sharuudo ku xiray siideynta Dabageed,sida uu inoo xaqiijiyay Sarkaal ay wadashaqeyn jireen Dabageed,iyadoona laga dayrinayaa xaaladiisa Caafimaad.
Ciidamada Itoobiya ayaa sii daynta dabageed waxay ku xireen inuu soo celiyo gaari dagaal oo ay saarnaayeen Ciidamo ku qalabeysan Rasaas,qoryaha fudfudud oo ay wahlinayaan dabajeexyo ,kuwaasi oo kal hore baxsaday haatan kusugan nawaaxiga matabaan ee gobalka Hiiraan .
Ciidamada Itoobiya ayaa sidoo kale ku eedeesay Dabageed inuu howlgaliyay Ciidamo taageersan lana shaqeeya Xarakada Mujaahidiinta alshabaab,islamarkaana hub aad u farabadan oo Itoobiya ay siisay loo gacan galiyay Wilaayada islaamiga ah ee Hiiraan.
Waxaa laxaqiijiyay haatan yuusuf Axmad Hagar Dabageed inuu xanuun la ildaranyahay ,islmarkaana uu matagay dhiig kadib markii mudo laba saac oo xiriir ah ay jirdileen Ciidamada Itoobiya ee haatan uu uxiran yahay.
Mana ahan markii ugu horeysay itoobiya ay xabsi dhigto Yuusuf dabageed iyo rag kale oo bilihii lasoo dhaafay ay ku abaabuleysay xuduud beenaadyada Itoobiya ay lawadaagto somaliya.
Oktoobar 29, 2010
Ra’iisul wasaraha Cusub oo lagu wado in berito lagu ansixyo fadhiga golaha Baaralamaanka Soomaaliya
Waxaa lagu wadaa in Maalinta berito ah in lagu ansixiyo Cod aqlabiyad ah Ra’iisul wasaaraha Cusub ee xukumadda KMG ah ee uu soo magacaabay Madaxweynaha Soomaliya Md Sheekh hariif Sheekh Axmed, kaas oo ansixintiisu ay muran Xoog leh ka dhax dhalisay Gudaha xubnaha golaha Baarlamanka Soomaaliya.
khilaafkaan oo gaaray heer ay besha caalamku soo fara geliso, isla markaasna wada ahadal lala yeesho madaxdda sar sare ee dawladda, si ay meesha uga saaraan is afgaran waaga sababay in uu hakad galo ansixinta Ra’iisul wasaraha Soomaliya Maxamed C/Laahi Maxamed (Farmaajo).
Sacadihii ugu dameeyay ayaa waxaa magaaladda Muqdisho ka soconayay kulamo gaar gaar ah oo ay leeyihiin Xubnaha golaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, kuwasi oo maanta ku kulansan 5 Hoteel oo ku kala yalla magaaladda Muqdisho, iyagoo u fadhiya 5-ta beelood ee uu ka kooban yahay Baarlamaanka ama 4.5, waxaana ay kulamadaasi ka kala socdaan Hoteeladda kala ah Saxfi One, Ambassador (oo ah kan ugu weyn uguna qaalisan, waxaana ku shiraya oo fadhiya beesha Digil & Mirifle), Nasa hablood two, Wehliye iyo Nasa Hablood one si ay uga arinsadaan beel walaba cidii u matali laheeyd Wasiiradda Xukumadda Cusub ee uu soo magacabaayo Marka la siiyo Codka kalsoonidda ah Ra’iisulo wasaraha cusub ee uu soo magaacaabay Madaxweyne Sheekh Shariif.
Sidoo kale kulamadaasi is daba joog ah oo soconayay malmihii la soo dhaafay kuwaasi oo siyaabo kala duwan oo ay uga hadlaayeen xubnaha Baarlamaanka, isla amarkaasna sii kala Fogeynayay Xubnaha baaralamaanka ayaa hadda u muqdda kuwo maanta isku aragti ka ah ka gadaal markii ay beesha calaamku soo fara gelisay soona afjartay wixii khilaaf ah ee la isku haystay.
Maalinta berito ah ayaa lagu wadaa inuu dhaco kulankii Baarlamaanka ee maalmahaan hakad ku jiray ayaa waxa ay wararkii ugu dambeeyay sheegaayan in ay kawada qeyb galayaan dhamaanba madaxdda sar sare ee dawladda, iyadoo xiligaasna si aan leex leex laheyinin ay u wada codeynayaan xubnaha Baarlamaanka halkaasina lagu soo afjarro wixii khilaaf ahaa ee jiray si uu u soo dhiso xukuumadii laga war sugayay maalmahan marka la ansixiyo Ra’iisul Wasaare Farmajo.
Oktoobar 28, 2010
Xildhibaan Afaraale OO Wareysi Gaar ah Siiyey Idaacadaha
Xildhibaan Maxamed xuseen Afaraale oo kamid ah mudaniyaasha Baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan kuwa Digilmirifle ayaa si kull wuxuu u weerarey Maamlka Gobolka banaadir, Go,aankii Maxkamada Sare iyo xildhibanada calooshood ushaqeystiyaasha ah ee wata magaca DM hadana u ololeynaya kii diidey jiritaankooda.
Afaraale oo caro xoogan ka muqatay ayaa wxuu yiri Xamar anagu marti kuma nihi ee waxaa noo joogo in kabadan inta Askar ah ee ay u joogaan kan watey magaca maamulka gobolka Banaadir, ee waxaan leeyahay caga Dhigo ayu yiri Xamar oo wanaga dhaxeysaaye.
Maxkamad wax la yiraahdo oo halkaan hada ka jiro oo shaqeeya ma jirto ayuu yiri afaraale arinkaasina ma ahan mid ayada utaalo ama loo dirsadey ee waxaan ugu baaqayaa dadka calooshood shaqeystiyaasha ah waa inay joojiyaan waraaqaha copy-ga falsaha ah ee ay wareejinayaan.
Mar wax laga weydiiyay xildhibaanada qaarkood ee u ololeynaya inu raiisulwasaare noqdo Farmaajo ayaa wuxuu sheegey in ay jireen kuwa habeenkii Durbaan ku ciyaari jirey waagii ay xureynayeen Baydhabo iyo deegaanada kale hadana ay sidaa la mid yihiin balse waxaa lagu arki doonaa ayaga iyo wixii ay dhalaan Taariikhda DM.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Oktoobar, 2010.